Chipolo One Spot, safidy tsara indrindra amin'ny AirTags | Vaovao IPhone
Chipolo One Spot, safidy tsara indrindra amin'ny AirTags
Luis Padilla | | Fitaovana IPhone, maro
Chipolo dia manolotra antsika ny tena safidy voalohany amin'ny Apple AirTags miaraka amina vokatra izay, amin'ny vidiny ambany dia manolotra antsika ny soa rehetra amin'ny karoka Fikarohana ary manampy teboka sasany manohana azy fa mahomby amin'ny fividianana izany.
Rehefa nanambara ny vaovao momba ny tamba-jotra Busca i Apple, dia iray amin'ireo marika nanatevin-daharana azy voalohany i Chipolo. Angamba tsy dia fantatra loatra izany, fa ity mpanamboatra ity dia efa teo amin'ny tontolon'ny marika mpamantatra efa an-taona maro, ary ireo taona niainany dia tsy isalasalana fa nanampy tamin'ny famoahana vokatra boribory tamin'ny vidiny lafo dia tsara: Chipolo One Spot. Mpandova ny Chipolo One, ity marika vaovao ity dia manararaotra ny tambajotra Fikarohana an'i Apple, ary noho izany dia manana ny tombony rehetra izy: tsy mila fampiharana an'ny antoko fahatelo; fametrahana haingana sy mora nefa tsy mila misoratra anarana; mampiasa fitaovana Apple an-tapitrisany handefasana ny toerana misy anao.
1 Famaritana sy fanahafana
2 Tambajotra Fikarohana an'i Apple amin'ny serivisinao
3 Fomba hafa hahitana azy
Famaritana sy fanahafana
Somary lehibe kokoa noho ny AirTags an'ny Apple, ity kapila plastika kely ity dia misy bateria azo soloina izay nolazain'ny mpanamboatra fa tokony haharitra hatramin'ny herintaona amin'ny fampiasana mahazatra. Mba hanovana azy dia mila manokatra ny kapila ianao, tsy misy rafitra fanidiana mihaja, izay no antony nanamarinana azy IPX5 (mahatohitra ny orana tsy misy olana nefa tsy milentika). Ao anatiny dia misy mpandahateny kely mamela azy hamoaka feo hatramin'ny 120dB, avo kokoa noho ny AirTag, zavatra manan-danja hahitana azy ireo avy any amin'ny farany ambany amin'ny sofa. Ary ny antsipiriany kely, izay toa mampihomehy aza, fa ny tena manandanja: misy lavaka ny fametahana azy amin'ny keychain, peratra amin'ny kitaponao na kitapom-batsy ... Midika izany fa na dia ny vidiny mitovy amin'ny AirTag aza (30 € vs. € 35 ho an'ny vokatra Apple) dia tsy mila kojakoja intsony ianao hampiasana azy, noho izany ny vidiny farany dia mora kokoa amin'ny tranga Chipolo.
Ny fizotran'ny fikirakira azy dia manomboka amin'ny fotoana anindohantsika ny Chipolo, izay mahatonga azy hamoaka feo kely izay manondro fa efa navadika izy io. Tokony hosokafantsika amin'ny iPhone na iPad ny rindran-karoka ataontsika, ary kitiho ny zavatra, manampy zavatra vaovao izahay ary miandry ny fitaovantsika hahita azy. Izao fotsiny ianao dia tsy maintsy manaraka ireo dingana voalaza ary tsotra izy ireo toy ny manampy anarana sy sary famantarana hahafantarana azy haingana eo amin'ny sari-tany. Ny marika dia manomboka amin'ity fotoana ity mifandraika amin'ny kaonty iCloud anao ary vonona hampiasaina rehefa ilaina.
Ny fifandraisana ampiasainao dia ny Bluetooth. Tsy manana puce U1 izahay, izay tsy mamela ny fikarohana marina ny AirTags, zavatra tsy maharesy lahatra ahy manokana satria tsy mandeha ny laoniny. Tsy manana NFC ihany koa io, ary midika izany fa raha misy mahita azy dia tsy ho ampy ny mitondra ny iPhone any amin'ny chibolo, fa tsy maintsy manokatra ny rindranasa Search izy ireo ary manadihady izany. Misy teboka kely ratsy roa, ka ny iray dia tsy azo ekena tanteraka (karoka marina) ary ny iray azo ahitsy (ampiasaina ny app Search ary dia izay).
Tambajotra Fikarohana an'i Apple amin'ny serivisinao
Andao ho any amin'ny zava-dehibe, inona no tena hanampy anao hahita ny zavatra very anao noho ny Chipolo One Spot: ny iPhone, iPad ary ny Mac manerana an'izao tontolo izao dia ho antennas izay hamela anao hahita ny zavatra veryo amin'ny sarintany. Eny, mandraka ankehitriny rehefa nametraka tag misy anao ianao dia voafetra ho ao anatin'ny faritra Bluetooth hahitanao azy, na manana ny vintana misy olona manana fampiharana mitovy aminao nandalo ianao. Ankehitriny miaraka amin'ny tambajotra Fikarohana an'i Apple dia tsy mila an'izany rehetra izany ianao, satria izay iPhone, iPad na Mac nohavaozina dia hilaza aminao hoe aiza ny entana very amin'ny hany fepetra takiana amin'ny maha eo akaiky anao ny.
Amin'izany, raha very zavatra iray ianao dia azonao atao ny manisy marika azy hoe very ao amin'ny app Search, ary lazao fa rehefa misy mahita an'io (na dia tsy fanahy iniana aza) dia mampandre anao izy ireo ary mampiseho izany aminao amin'ny sarintany. Raha tsapany fa misy zavatra tsy eo, dia azony atao ihany koa ny manokatra azy, manokatra ny app Find azy ary mahita ny hafatra manokana navelanao azy rehefa nanamarika azy ho very izy, anisan'izany ny nomeraon-telefaona azony antsoina hanampiana ny fanarenana azy. Ity tambajotra Apple Find ity dia rafitra tonga lafatra izay hanampy anao hamerina ny tanjonao very.
Fomba hafa hahitana azy
Raha diso toerana nametrahantsika azy tany an-trano dia azonao atao ny mamoaka azy, avy amin'ny app Search na amin'ny fanontany an'i Siri "Aiza ny lakileniko?" Azonao arahana amin'ny alàlan'ny feo izany mandra-pahitanao azy. Ny fanamafisam-peo dia mafy noho ny AirTags, ary koa ny feo dia tsy mijanona milalao mandra-pisehoninao, izay azo ampiharina kokoa noho ny mila mandehandeha manontany an'i Siri mandra-pahitanao azy. Ary azonao atao koa ny mangataka amin'ny app Search hiteny aminao ny làlana mankany amin'ilay zavatra very anao raha sendra nisy olona nandray anjara tamin'ny fitadiavana azy tamin'ny sari-tany.
Ary tahaka ny an'ny iOS 15 dia hanana safidy hampandrenesina isika rehefa misaraka aminy, mba hialantsika amin'ny fahaverezana. Ny fampandrenesana dia hilaza amintsika fa efa nilaozanay ny lakilenay, na kitapo, ary afaka manamboatra toerana "azo antoka" sasany izahay ka raha eo ianao dia tsy hampandre anay Navelanay tany aoriany io, mba hahafahanao mamela ny kitaponao any an-trano nefa tsy holazaina momba izany.
Ny marika feo Chipolo One Spot dia tena safidy tsara amin'ny Apple AirTags. Na dia mety tsy misy fampiasa sasany aza izy ireo, dia tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ny fakana azy ireo, ary ny fiasa sy ny vidiny dia mahatonga azy io ho vokatra lavorary ho an'ireo izay te hisoroka ny fahaverezan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tombony amin'ny tambajotra Search. Manzana. Hita ao amin'ny tranonkala ofisialin'i Chipolo (rohy) ho mialoha ny famandrihana ho an'ny € 30 isaky ny singa ary € 100 isaky ny fonosana 4 na singa, miaraka amin'ny fandefasana manomboka ny volana aogositra.
Herintaona maharitra sy bateria azo soloina
Fanoherana ny rano IPX5
Mampiasa ny tamba-jotra Apple Search
Hole ho an'ny hooking
Mpampiresaka hatramin'ny 120dB
Tsy fisian'ny chip NFC sy U1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Chipolo One Spot, safidy tsara indrindra amin'ny AirTags
Amin'ny tvOS 15 isika dia afaka miditra miaraka amin'ny ID amin'ny iPhone
Ity no fomba niarovan'i Apple ny tsiambaratelon'ny rindrambaiko amin'ity WWDC 2021 ity